Marca Oo Shaacisay In Liverpool Laga Soo Diiday Dalab 75 Milyan Oo Ay Ka Gudbiyeen Kylian Mbappe - Laacib.net
Marca Oo Shaacisay In Liverpool Laga Soo Diiday Dalab 75 Milyan Oo Ay Ka Gudbiyeen Kylian Mbappe
Inkastoo kooxaha sida Liverpool ay xiiseynayaan saxiixiisa, Monaco ayaa soo diiday dalab 75 milyan yuro ah oo laga soo gudbiyay Kylian Mbappe, waxaana ay sameyn doonaan wax walba oo ay ku qaadato sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen xiddigaan inuu ku sii negaado France xilli ciyaareedka soo socda sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka kooxda Vadim Vasilyev.
Kooxda Reds ayaa soo bandhigtay xiisaheeda laakiin tababaraha kooxda Faransiiska Dimitri Rybolovlev ayaa waxaana ka dhaadhacsan in dalabkaas la sugi karo sannad kale.
Sida ay ogaatay jariirada Isbaanishka ee Marca, dalabka waxaa soo diiday Monaco kuwaasoo aaminsan in xiddigooda tayada leh uu u qalmo lacag kor u dhaafeysa 100 milyan yuro.
Weeraryahanka da’da yar ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah horyaalka France iyo weliba Champions League taasoo keentay inuu soo jiito kooxaha waa weyn ee Yurub, waxaana Vasilyev uu sheegay in inkastoo Monaco ay ceshan doonto ciyaaryahanka hadana inay kooxda ixtiraami doonto go’aankiisa.
“Waxaan sameyn doonaa wax walba oo awoodeena ah si uu kooxda uga sii mid ahaado” ayuu u sheegay Canal +.
“Si kastaba, wax walba waxa ay ku xiran tahay waxa uu doonayo ciyaaryahanka.”
Iyadoo hal kulan ay ka harsan tahay dhamaadka xilli ciyaareedka, Mbappe ayaa ka qeyb qaatay 40 ka mid ah goolasha ay kooxdiisa dhaliyay tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay 26 gool halka uu caawiye ka noqday 14, 43 kulan uu dheelay.